Umyalelo weScratchpad: Eyona ndlela ikhawulezayo yokuFikelela kunye nokuHlaziya ukuThengisa kwiiVenkile zeWebhu | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 2, 2021 NgoLwesine, Julayi 22, 2021 Douglas Karr
Abaphathi beakhawunti phantse kuyo yonke imibutho yentengiso bagcwele izixhobo zokuthengisa ezininzi ezinikezelweyo CRM. Oku kunyanzela abathengisi ukuba basebenze ixesha elininzi kunye nokudinwa kokuhambahamba ubuyela umva nangaphandle phakathi kwezixhobo, ukulawula uninzi lwee-tab zesikhangeli, ukucofa okukruqulayo, kunye nokukopa nokudinisa, ngalo lonke ixesha kwangaxeshanye uzama ukuvuselela i-Salesforce. Ngenxa yoko, kukho ukwehla ekusebenzeni kwemihla ngemihla, imveliso, kwaye, ekugqibeleni, ixesha lokuba abathengisi benze imisebenzi yabo-bathengise.
Umyalelo weScratchpad isungule, ivula indlela ekhawulezayo yokuba abathengisi bafikelele kwaye bahlaziye amanqaku abo okuthengisa, imisebenzi, kunye neNtengiso, nakusiphi na isicelo sewebhu okanye indawo yokuthengisa- simahla.
Emva kokuthetha ngokuthe ngqo namawaka abaphathi beakhawunti kwimibutho yokuthengisa yabo bonke ubungakanani, safunda ukuba bachitha ngaphezulu kwesiqingatha sexesha labo behlaziya i-Salesforce endaweni yokuthengisa. Abaphathi beakhawunti bafuna ukuvuselela i-Salesforce ngokukhawuleza ngaphandle kokutshintsha umxholo kunye nokophula ukuhamba kwabo, ukuze babe nokuncokola ngakumbi nabathengi kunye nokuvala ezinye izivumelwano. Umyalelo weScratchpad wenza ukuba wonke umsebenzisi we-Salesforce eMhlabeni enze uhlaziyo olufunekayo, nakweyiphi na iwebhusayithi, ngaphandle kokutshintsha iithebhu, simahla. Kuyakhawuleza. Ilula. Kwaye kuyonwabisa ukusebenzisa.
U-Pouyan Salehi, umseki kunye ne-CEO yeScratchpad
Ngomyalelo weScratchpad, ngonqakrazo olunye, abasebenzisi banokwenza umfowunelwa omtsha, iakhawunti, ithuba, umsebenzi, okanye umsebenzi kwaye benze uhlaziyo kuyo nayiphi na intsimi yesiko okanye into kwi-Salesforce. Abaphathi beakhawunti banokwenza, bahlaziye kwaye bavumelanise amanqaku abalulekileyo esivumelwano naphina, basuse isidingo sokungena ngqo kwi-Salesforce ngokuthe ngqo, bump phakathi kwezinye izixhobo zokuthengisa, okanye uxakeke ngokukopa kunye nokuncamathisela ukusuka kwesinye isicelo ukuya kwesinye.
Umyalelo weScratchpad unokusetyenziselwa apho abaphathi beakhawunti babandakanyeka kwiindawo zentengiso, ukubanceda bahlaziye iSalesforce ngelixa benxibelelana noontanga babo kunye nabalingane naphi na kwi-intanethi. Ukongeza, iinkokheli zentengiso ziyaxhamla kukufikelela kwangoko kwidatha ye-Salesforce ehlaziyiweyo ngelixa besebenza kwizixhobo zabo zokuxela kwangaphambili kunye neenkqubo ze-BI, okanye iideshibhodi zokwenza ingxelo zangaphakathi.
Abathengi banokufaka iScratchpad njenge Iplagi ye-Chrome, Qhagamshela kwi-Salesforce kwaye wenze uhlaziyo kumbhobho kwimizuzwana engama-30 okanye ngaphantsi. IScratchpad iqhagamshela kwangoko kwi-Salesforce kwaye inike abathengisi ujongano olukhawulezayo nolwanamhlanje lokunxibelelana nedatha yabo yokuthengisa kunye nokuhamba komsebenzi. I-Salesforce ihleli kwindawo yogcino lwedatha, ngelixa iScratchpad isebenza njengendawo yokuzibandakanya ekonwabela amaqela eengeniso ukusebenzisa.
Xa kuziwa kubameli bezentengiso, akukho nto iyinyani ngaphezu kwebinzana ixesha yimali. Kwaye xa elo xesha (kunye nemali) linqunyulwa phakathi ngenxa yokungasebenzi kakuhle okubangelwa zizo zonke izixhobo kunye nezicelo ezimele ukwenza imisebenzi yazo ibengcono, ayisiyongxaki yomntu othengisayo kuphela kodwa kumgca osezantsi wombutho . Umyalelo weScratchpad wenza ukuba abaphathi beakhawunti balawule ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kwimibhobho yabo ngokusebenziseka lula kwendawo yokusebenza, ukuze bakwazi ukubuyela ekuvaleni ezinye izivumelwano kunye nokwenza ifuthe elikhulu kwishishini.
UNancy Nardin, uMseki, Izixhobo zokuthengisa eziSmart
Umyalelo weScratchpad ngoku uyafumaneka kubasebenzisi be-freemium kunye nabahlawuliweyo.
Isithuba sokusebenzela esiManyeneyo
IScratchpad ibonelela ngendawo yokusebenza emanyeneyo phakathi kwekhalenda, amanqaku okuthengisa kunye ne-Salesforce. Ngethuba lokuqala, nayiphi na isigqeba se-akhawunti, ummeli wophuhliso lwezentengiso (SDR), okanye umphathi wentengiso usebenzisa iSalesforce unokufikelela kwaye enze amanqaku, ongeze kwaye atyebise abafowunelwa abatsha, kwaye enze kwaye alawule imisebenzi ngokuthe ngqo kwikhalenda yabo.
Ikhalenda, ii -apps zokuthatha amanqaku, imisebenzi, kunye ne-Salesforce ziyinxalenye ebalulekileyo yosuku lomthengisi ngamnye, kodwa zikhutshwe ngokupheleleyo kwaye azihambelani nomsebenzi womthengisi. Ixesha elide kakhulu, iingcali zentengiso kuyo yonke imibutho ziye zadibanisa ii -apps ezingahleliwe ukuze zenze indawo yazo yokuthengisa. Ezi hacks zenziwe ngaphandle kwemfuneko kumzamo wokuhlala zilungelelanisiwe, zilawula iintlanganiso, zihlaziya kwaye zabelane ngamanqaku okuthengisa, zilandele kumanyathelo alandelayo, setha imisebenzi, qinisekisa ii-handoffs ezingenamthungo, kunye nokusebenzisana kwiqela elinengeniso.
Ngenxa yoko, ezi ndawo zisebenzayo zifuna ukudinwa kunye nolawulo lwedatha, kunyanzelisa abathengisi ukuba bachithe ixesha elingenakulinganiswa ekufakweni kwedatha endaweni yokuthengisa kubathengi. Ngapha koko, ingxelo evela kubathengisi ityhila ukuba abathengisi banamhlanje bachitha kuphela iipesenti ezingama-34 zexesha labo bethengisa. Amaqela e-RevOps kunye nee-SalesOps ayaqhubeka nokukhathazeka njengoko ezi nkqubo ziqhekezwe kunye zingadibananga nomthombo wenyaniso yedatha- iSalesforce.
Iinkcukacha ezithe xaxe Yongeza kwi-Chrome
tags: chrome iplagiGoogle chromegoogle chrome iplagiUNancy nardinUPouyan Salehpouyan salehiukuthengisaisikriphediUmyalelo we-scratchpadizixhobo ezithengisa smart